Flow!Inoshanda pro
Shanduro itsva yeQOMO yeFlow! Works ine zvinhu zvitsva zvakawanda uye zvekushandisa kuita kuti kudzidzisa kuve nyore, kunakidza, uye kukurudzira zvakanyanya kuvadzidzi nevadzidzisi.Gadzira zvidzidzo zvinonamatira vadzidzi vemazera ese uye marudzi ese ekudzidza nekubvumira vadzidzi vako kutarisa, kuteerera, uye kubata zvese kamwechete.
Iine zvikamu zvitatu muhukuru interface
Menu interface yekuvhura faira, kuchengetedza uye kudhinda faira.Tumira PowerPoint zviri nyore kuita mharidzo ichidyidzana nesoftware, nezvimwe.
Toolbar interface yezvishandiso zvakasiyana kushandisa.Unogona kushandura ruvara rwepeni kuti utaure pachirongwa chechidzidzo.Sarudza maturusi ekufambisa chirevo uye shandisa chipfudziso kudzima.Fambisa bhara rekushandisa zviri nyore kune chero yakachinjika kana yakatwasuka edge ye interface.Unogona kufambisa bhara rekushandisa pamucheto wepamusoro kuti vana vane misikanzwa vasasvike pairi.
Slide manejimendi yePPT mharidzo.Batidza PPT yako.Wedzera kana kuderedza peji paunokuitira zvakanaka.
Ita sarudzo zvichienderana nehuwandu hwezvishandiso zvepeni.Sarudza kubva kumifananidzo yakasiyana-siyana yepeni yako yakasarudzika ine manyorerwo peni chishandiso;Shandisa chinyoreso chehighlighter kana laser pen kuti udane hanya kune izvo.
Kukwiridzira kweFlow!Inoshanda pro software
Zvakanakisa zvesoftware ndizvo zviri pasi apa
Kuyerera!Inoshanda pro software ine zviuru zvezvidzidzo zvekudzidzisa.Zvichakadaro, iwe unogona kuwedzera yako sosi semufananidzo/odhiyo/vhidhiyo musoftware uye wovachengeta sechinhu chako pachako.
Zvinhu zviri pawebhusaiti zvinogona kuiswa pabhodhi rekudhirowa kuti zvishandiswe mukuratidzwa.Panguva yekutsvaga webhusaiti, iwe
inogona kusarudza chinhu chaunoda (mifananidzo kana zvinyorwa) uye woikwevera pabhodhi rekudhirowa.Izvi zvinobatsira zvikuru kuti vadzidzi vazive nezvezvidzidzo zviri nyore.
Zvinotevera: QPC20F1 USB gwaro kamera
Flow!Inoshanda Pro bhurocha